वामदेव बने रा-ष्ट्रियसभा सदस्य, के अब मुलुकले कोल्टे फेर्ला त? पढी आफ्नो बिचार राख्नुहोस। – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
वामदेव बने रा-ष्ट्रियसभा सदस्य, के अब मुलुकले कोल्टे फेर्ला त? पढी आफ्नो बिचार राख्नुहोस।
२००१ मा मोदी गुजरातको मुख्यम_न्त्री बने । त्यसपछि उनले २०१४ सम्म यो जि’म्मेवारी निर्वाह गरे । २०१४ को लोकसभा नि’र्वाचनमा भाजपाले बहुमत ल्याएपछि मोदी पहिलो कार्यकालका लागि प्र’धानमन्त्री चुनिएका थिए । २०१९ मा भएको नि’र्वाचनबाट उनी दोस्रो कार्यकालका लागि प्र’धानमन्त्री चुनिएका छन् । आधुनिक भारतका श’क्तिशाली व्यक्तिहरुमध्ये मोदी एक मानिन्छन् । राटोपाटीबाट
Previous कुलमान घिसिङको निरन्तरतामा कुनै कानूनी अ’ड्चन नरहेको जानकारहरुको तर्क…हेर्नुहोस् ।(भिडियो सहित)
Next कुलमानको पुनर्नियुक्तीको ‘च्याप्टर-क्लोज’, बालुवाटारको तयारी अर्कै ! के भन्नू हुन्छ नी?